डस्की छालाका लागि सर्वश्रेष्ठ न्यूड लिप शेडहरू - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सुन्दरता
6 Dusky छाला को लागी सर्वश्रेष्ठ न्युड लिप शेड्स
घर सुन्दरता सुझावहरू बनाउनुहोस् सुझावहरू बनाउँनुहोस् oi-Monika खजुरिया द्वारा मोनिका खजुरिया जून १,, २०१ 2019 मा
नग्न ओठ शेडहरूले हाम्रो जीवनलाई यस्तो तरीकाले लेराएको छ जुन हामीले सोचेका थिएनौं। हामी नग्नहरूलाई प्रेम गर्छौं र हामी सबैको मनपर्दो नग्नता छ। आज बजारमा नग्न ओठको शेडहरू उपलब्ध छन् र भनिन्छ कि त्यहाँ प्रत्येक छाला टोनका लागि नग्न उपलब्ध छ। जे होस्, यी सबै विकल्पहरू उपलब्ध भएको साथ यो तपाईंको छालाको टोनको लागि उत्तम नग्न भेट्टाउनु कठिन काम हो।
भगवान वेंकटेश्वरको कृपा कसरी जित्ने
जबकि यो विश्वास गरिन्छ कि ओठको शेडहरू भेट्टाउनु गाह्रो छ जुन विदेशी डस्की छाला टोनसँग मिल्दछ, जब यो नग्न ओठको छायाको कुरा आउँछ भने, विश्व तपाईंको कस्तूरी हो। नग्न ओठ शेड्स कालो छाला मा तेजस्वी देख्न सक्छ। तपाईले अलि बढि अन्वेषण गर्न आवश्यक छ। यो नग्न र नग्न र धेरै कालो हुन सक्छ नग्न कालो छालाको लागि काम गर्नका लागि।
आजको लेखमा भनिएपछि, हामीले छवटा नग्न ओठ शेडहरूको सूची संकलित गरेका छौं जुन हामीलाई लाग्छ कि यो अन्धकार छाला टोनका लागि उत्तम कार्य गर्दछ। हेर्नुहोस् र आफ्नो नग्न छनौट गर्नुहोस्।
१ ट्यान ब्राउन
ट्यान अहिले 'इन' रंग हो, यो तपाईंको शरीर वा तपाईंको ओठमा छ। यदि तपाईं अन्धकार छालाको टोन पाउनुभयो भने, एक ट्यान ब्राउन तपाईंको लागि रंग हो। यो मध्यम देखि डसकी लिप शेडको लागि एक उत्तम लिप शेड हो र बिभिन्न मेक-अप देखिको साथ राम्रोसँग काम गर्दछ।
यो एक तटस्थ छाया हो जुन तपाइँलाई तपाइँको आँखाको लुकसँग खेल्ने उत्तम अवसर दिन्छ। केवल तपाईंको भौहें भर्नुहोस्, केही हाइलाइटरमा राख्नुहोस् र तपाईं रोल गर्न तयार हुनुहुन्छ।
२. नग्न बैजनी
ठिक छ, यो रंग हो तपाईं सायद शंकास्पद हुन सक्नुहुन्छ। तर हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् र यसको लागि जानुहोस्। यो एक ओठको छाया हो जुन तपाईंको डस्की छाला टोनको साथ आश्चर्यजनक रूपमा राम्रोसँग जान्छ। यो वास्तवमा नग्न छाया हो जुन हाम्रा धेरै प्रिय हस्तीहरूले लगाउँदछ।
एक चमक संग यो माथि बन्द र यो तपाइँको पूरै हेराई पम्प हुनेछ। यो अर्को लिप शेड हो जुन तपाईंलाई तपाईंको आँखाको छायासँग खेल्न अनुमति दिन्छ। तपाईं आँखा तटस्थ राख्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईंको चमकमा चमक थप्नको लागि केही चमक थप्न। यद्यपि तपाईंको आधार तटस्थ राख्नुहोस् र तपाईंको ओठ र आँखा तपाईंको लागि सबै कुरा गरौं।
Pink. गुलाबी बेज
गुलाबी रंगको बेज भनेको अर्को नग्न ओठको छाया हो जसलाई अँध्यारो छालाले रक गर्न सक्छ। यो आदर्श हो जब तपाईं बाहिर खडा गर्न चाहनुहुन्न तर अझै त्यस्तो आधारभूत देखिनुहुन्न। यो ओठको छाया राम्रोसँग कांस्य आधार र कालो आँखा संग जोडी छ।
यो एक लिप शेड हो जुन तपाईंको लुक नरम गर्न मद्दत गर्दछ। एक अर्ध-मैट समाप्त छनौट गर्नुहोस् यदि तपाईं यो रंगको लागि छनौट गर्नुहुन्छ। एक अर्ध-मैट समाप्त गर्नाले यस ओठ छायाको प्रभाव बढाउनेछ।
Pea. पिच गुलाबी
यदि तपाई बोल्ड र सेस्सी कथन बनाउन चाहानुहुन्छ भने, यो र choose्ग रोज्नुहोस्। पीच गुलाबी लिप शेडले डस्की छाला टोनको लागि आश्चर्यजनक कार्य गर्दछ। यो एक लिप शेड हो जुन तपाईं विभिन्न चहकिलो रंगको कपडाहरूको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, फेशन स्टेटमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र न्यूनतम मेक-अपको साथ अचम्मका साथ काम गर्दछ।
यस लिप शेडको साथ एक सानो blush र हाइलाइटर जोड्नुहोस् र तपाईं रमाइलो रात को लागी तयार हुनुहुन्छ।
Bl. ब्लश गुलाबी
त्यो ग्लैमरस अवतारको लागि ब्लश गुलाबी लिप शेड छान्नुहोस्। यो असामान्य लाग्न सक्छ, तर यो आकर्षण जस्तै काम गर्दछ। यस छायाँ लगाउनुहोस् जब तपाईं तपाईंको रुचि अलग देखिन चाहनुहुन्छ। यस छायाँले तपाईलाई एज्जी र परिष्कृत लुक दिन्छ।
पेशाब मा पुस कोशिका को लागी उपचार
बोल्ड बिरालो आँखा र चमकदार आईशैडोको साथ त्यो जोडा मिलाउनुहोस् त्यो ओमफ कारकको लागि वा तपाईंको आँखा तटस्थ देख्नुहोस् र तपाईंको ओठ चमकौं। तपाईंको लुकमा ब्लशको एक पप थप्नुहोस् र यसले तपाईंको ओठ छाया पूर्ण रूपमा पूरक गर्दछ।
Ch. चकलेट ब्राउन
आजको लागि अन्तिम एक चकलेट खैरो हो। यो उल्लेखित सबै शेड का सबैभन्दा गाढा हो। गहिरो र अँध्यारो, यो छायाँ dusky एक भन्दा गाढा छाला टोन को लागी पनि काम गर्दछ। यो छायाँ तपाईको हरेक दिन आकस्मिक ओठको छाया र तपाइँको अफिसमा लगाउनको लागि एक उत्तम छाया हो। यस ओठको छायाले तपाईंलाई उही समयमा सेसी र ठाडो हेराइ दिनेछ।
यदि तपाईं यस छायामा खेल गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको आँखा तटस्थ राख्न निश्चित गर्नुहोस्। एक आधारभूत बेज बेजो आखाँको पतली पंक्तिबद्ध आँखाहरू र मस्कराको राम्रो कोटको साथ तपाईंको ओठको छाया र पूरै हेराई बढाउनेछ।
पहिलो विवाह वार्षिकोत्त्व पतिको लागि शुभकामना
कसरी महिलाको लागि कपाल जेल प्रयोग गर्ने
निष्पक्षताका लागि सुन्तलाको बोक्रा पाउडर कसरी प्रयोग गर्ने
कपालको विकासको लागि घरेलु उपचार छिटो
म एक बच्चा केटाको उद्धरणको साथ धन्य छु